होलीको रङ्ग परीक्षण: रातो, हरियो र निलो शरीरका लागि घातक ! – देशसञ्चार
फाइल तस्बिर: सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्‍चार
होलीमा होस् पुर्‍याउनुस्
होलीको रङ्ग परीक्षण: रातो, हरियो र निलो शरीरका लागि घातक !
प्रतिभा चन्द चैत्र ५, २०७५
होली रङको पर्व हो। रंग सँगसंगै होलीमा आपसमा खुसी र प्रेम साटासाट गरिन्छ। फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने यो पर्व विशेषगरी हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले मनाउने गर्छन्।
‘लिड’ के हो ?
देश सञ्चारले बजारमा उपलब्ध केही रङ्गहरुको नमुना संकलन गरी तीनको परीक्षण गरेको छ। उ्रक्त परिक्षणमा रातो, हरीयो, र निलो रङ्गमा क्याड्मियम (टक्सिमेटल) [cadmium (toximetal)] र लिड (टक्सिमेटल) [lead (toximetal)] को मात्र फेला परेको छ। जसले बौद्धिक क्षमतामा ह्रास, किड्नी, कलेजो, मस्तिष्क, हड्डि, यौनाङ्ग जस्ता अङ्गमा क्यान्सर हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ। जसले वातावरण तथा जीवजन्तुमा नकारात्मक असर परी पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भिर असर गर्नका साथै खाद्यपदार्थलाई विषाक्त बनाउने गर्छ।
यस्ता रासायनिक तत्वहरु मानव शरीर तथा वातावरणका लागि कुनै आवश्यक नपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। जुन शरीरभित्र प्रवेश गरेमा स्वास्थ्यमा गम्भिर हानी गर्ने गर्दछ। त्यसकारण यस्ता रसायनयुक्त चिजहरु प्रयोग नगर्न उनीहरुको सुझाव छ।
चैत्र ५, २०७५ मा प्रकाशित